ဦးကြိုက်တာလုပ်ပါ – Grab Love Story
ဒီနေ့မှ ကားကလဲ ကျပ်လိုက်တာထုံးစံအတိုင်း ညနေရုံးဆင်း ချိန်ဆိုတော့ပိုဆိုးနောက်လူတွေအဆင်ပြေအောင် အနောက်ထဲတိုးမှပဲဆိုပြီး အနောက်ထိရောက်အောင်တိုးတယ် ဒါမဲ့အလယ်ကောင်မှာပဲညပ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲ အနောက်ကနေ ဦးလေးကြီးတယောက်လာရပ်တယ် မသိသလိုပဲနေလိုက်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ သူက လူကြပ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးအနောက်ကနေ သူ့လီးကြီးနဲ့ လာထောက်ထားတယ် ချိုလဲ ဘယ်လိုမှရှောင်မရတာနဲ့ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မှပိုဆိုးတယ် အနောက်ကနေထောက်ရင်းလက်ကထမီစကပ်အကွဲထဲဝင်လာ ပြီး အဖုတ်ကိုနှိုက်တယ်နောက်လက်တဖက်ကလဲ တင်ပါးတွေကို နယ်နေတယ်နောက်ပြီး နားနား ကိုကပ်ပြီး လေသံနဲ့ပြောတယ်”ကလေးမ နင့်ဖင်က တင်းနေတာပဲ” “စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲအကြီးကြီးပဲစောက်ရည်တွေလဲရွှဲနေတာပဲ”ကျွန်မလဲ “အဲ့လိုမပြောပါနဲ့” လို့ပြောလိုက်တယ် ပိုတောင်ဆိုးသွားတယ်”ဘာမပြောရမှာလဲ ခု နင့်ဖင်ကို ငါ့လီးနဲ့ထောက်ထားတာ””နင်ခံလို့ကောင်းတယ်မလား” “စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ပေးနေတာရော ကြိုက်တယ်မလား” “ငါ့လီးနဲ့ နင့်စောက်ဖုတ်ကြီးကို လိုးချင်တာ”ကျွန်မလဲ “ဟင့်အင်း အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်” ။
“နင့်စောက်ပတ်ကြီး ပြဲသွားအောင် ငါ့လီးကြီးနဲ့လိုးပေးမယ်” “နင် အလိုးခံရတာ ကြိုက်တယ်မလား””ဟင့်အင်း ကျွန်မ မသိဘူး””မသိရင် ငါပြမယ်ဆိုပြီး” ကျွန်မ အဖုတ်ထဲကို လက်ခလယ်ထည့်ပြီး လိုးသလို လုပ်ပါတယ်”ကျွန်မလဲ အရမ်းကောင်းနေတာနဲ့ အသံထွက်မှာဆိုးလို့ အံကြိတ်နေရတယ် “ကောင်မ နင်အိမ်မပြန်ခင် ငါ့အိမ်လိုက်ခဲ့””နင့်ကို အဝလိုးပြီးမှပြန်လွှတ်မယ်””ကောင်းတယ်မလား ” အာ့နဲ့ ကျွန်မလဲ ဘယ်သူလဲဆိုတာ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ခြေရင်းအိမ်က သောင်းထိုက်ဆိုတဲ့လူကြီးဖြစ်နေတယ် “မိချို နင့်စောက်ဖုတ်ကြီးက အကြီးကြီးပဲဟ” “လူတွေကြားကုန်ပါ့မယ် ဦးလေးရယ်” “အာ့ဆို နင်ငါ့အိမ်လိုက်ခဲ့မှာလား””ဟင့်အင်း မလိုက်ချင်ဘူး” “ကောင်းပြီလေ အာ့ဆို နင့်ကို ကားပေါ်မှာပဲ လိုးရတာပေါ့” “အို အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့””ဒါဆို ငါ့အိမ်လိုက်ခဲ့ နင့်စောက်ဖုတ်ကြီးက ကြီးတော့ ငါ့လီးကြီးနဲ့ လိုးပေးမှနင်ကောင်းမှာ ကြားလား” ကျွန်မလဲ အရမ်းခံချင်နေတာမို့”ဟုတ် ဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့နော်” “အေးပါ “အဲ့ချိန်မှာ စပယ်ယာက”လမ်းဝ ပါလား” “ဟုတ် ပါတယ် “ကျွန်မတို့လဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ဆင်းလိုက်တယ်အချိန်က ၆နာရီလောက်ဆိုတော့ မှောင်နေပြီ လမ်းထိပ်က လူလဲရှင်းတယ်သူက ရှေ့ကလျှောက်တယ် ကျွန်မက နောက်ကလျှောက်တယ်အိမ်နားရောက်လာတော့ “မိချို ဒီညတော့ ငါနင့်ကိုမလိုးတော့ဘူး အချိန်လဲမရဘူး မနက်ဖြန် နင်အလုပ်မသွားနဲ့ အလုပ်သွားသလိုနဲ့ ငါ့အိမ်ထဲဝင်လာခဲ့ နင့်ကို တနေကုန်အေးဆေးလိုးမယ်” “အလုပ်က….””ပြန်မပြောနဲ့ မနက်ဖြန်လာရင်လာ မလာရင် နင့်ဦးလေးကို နင်ရည်းစားနဲ့ တည်းခိုခန်းသွားတယ်လို့ သွားပြောမယ်””မပြောပါနဲ့ ” “အေး အဲ့သလိုဆို မနက်၆နာရီ အရောက်လာခဲ့” “ဟုတ်””ငါ လိုးမလေး ဒီည အဝအိပ်ထား မနက်ဖြန်ကျရင် နင့်စောက်ပတ်ပြဲတဲ့အထိ လိုးမှာ နင့်စောက်ပတ်ထဲ တနေကုန် လီးထိုးထည့်ထားမှာ ကြားလား” “….””ငါလိုးမ ပြန်ပြောလေ””ဟုတ်ကြားပါတယ်” “အေး ကြားရင် ဦးလီးကြီးနဲ့ စပတ်ပြဲအောင် လိုးခံပါ့မယ်လို့ပြောစမ်း””ကျွန်မ…””ပြောစမ်းခု” “ဟုတ် ဦး လီးကြီးနဲ့စပတ်ပြဲအောင် အလိုးခံပါ့မယ်” ။
“အေး မနက်ဖြန်လဲ အဲ့လိုပဲပြောရမယ်””သွားတော့ မနက်၆နာရီနော်””ဟုတ်” ကျွန်မလဲ အိမ်ထဲဝင်ခဲ့လိုက်တော့တယ်” အိမ်ရောက်တာနဲ့ ချိုလဲ ချုံးပွဲချ ငိုပစ်လိုက်မိတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ အားမရဘူး ဒီလို တဖက်သက် ယုတ်မာတာကို ငြိမ်ခံခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသထွက်တယ်…ကြည့်နေ ငါမနက်ဖြန် လုံးဝမသွားဘူး… စိတ်ကို တင်းထားပေမဲ့လဲ တဖက်ကလဲ သွားချင်နေတယ် ခံစားရတဲ့ ဖီလင် က ဆိုးပေမဲ့ အဲ့အရာကိုပဲ ကြိုက်နေမိတယ် ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ရေမချိုး နေရာကမထပဲ အတော်ကြာကြာ ထိုင်နေတုန်း”ဟဲ့ မိချို မိချို……” အိမ်ရှေ့ခန်းက ဦးလေးရဲ့ အော်ခေါ်သံ တစ်ရပ်ကွက်လုံးတောင် ကြားတော့မယ် ထင်တယ် စိတ်ညစ်ပါတယ် ဂယ်ပဲ “မိချို…..ငါခေါ်နေတာ မကြားဘူးလား မြန်မြန်လာစမ်း” “ရှင်…လာပြီ”ချိုလဲ ကုတင်ပေါ်က အမြန်ဆင်းပြီး ဦးလေးရှေ့တော်မှောက် အရောက်ပြေးရတယ် ဟိုရောက်တော့ ဦးလေးဖြစ်သူက ငုတ်တုတ် ငိုက်နေတယ် ငိုက်နေတာလား မူးနေတာလာလဲ မသိပါဘူး… “ဦးလေး ဘာခိုင်းမလို့လဲ” “နင့်အဒေါ်ရော…ဘယ်သွားလဲ” “မသိဘူးလေ သမီးတောင် ခုနလေးကမှ ပြန်ရောက်တာ” “နင့်မေးလိုက်ရင် မသိဘူးချည်းပဲ သွား ခုသွားရှာ” ဟင့်! ဒီအချိန်ကြီး ဘယ်သွားရှာရမှာလဲ “ဟို..ဒေါ်သေးမတို့အိမ် သွားတာနေမှာပေါ့” “ဘယ်သွားသွား လိုက်ခေါ်ဆို ခေါ်လိုက်… ဒီမှာ ငါ သူ့ကို လိုးချင်နေပြီ” ငင့်!! သူလိုးချင်တာ သွသူလိုက်ခေါ်ပါ့လား အလကားနေရင်း ပြသာနာရှာတယ်ဟွန်း လိုးဦးမယ်တဲ့ လူကဖြင့် ခေါင်းက မြေကြီးထဲဝင်တော့မယ် ။
“ဟဲ့ မသွားသေးဘူးလား ငါ…တယ်….နင့်ကိုပဲ လိုးရတော့မှာလား””ဟင့်အင်း ခုသွားပြီ ဦးလေး” ချိုလဲ မြန်မြန် လစ်ထွက်လာခဲ့ရတယ် ချိုတို့က ရွာကနေလာတာ အိမ်မှာ အဆင်မပြေလွန်းလို့ မြို့တက် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ အဖေတို့ အမေတို့က ဆွေမျိုးနီးစပ် အဒေါ်နဲ့ ဦးလေးအိမ်မှာ လာထားတာပါ… အလကားနေရတာတော့ မဟုတ်ဘူး ဦးလေးက အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့ လစာက လင်မယားနှစ်ယောက် စားလောက်ရုံပဲရှိတယ် အဒေါ်ကတော့ မိဘလက်ထက်က ကျန်ခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံအရင်းအနှိးတဲ့ ငွေတိုးချေးစားတယ် ချိုလဲ အိမ်လခနဲ့စားစရိတ်လေးနည်းနည်းပါးပါးထောက်ရတာ လောက်ပါပဲ”ဟဲ့ မိချို…ဘယ်သွားမလို့လဲ ဒီအချိန်ကြီး” ချိုလဲအတွေးတွေလွန်နေတာနဲ့ ဒေါ်လေးကိုမမြင်ပဲ ကျော်သွားတယ်”ဟယ်ဒေါ်လေး ဒေါ်လေးကို လိုက်ရှာနေတာ” “ငါ့ကို ဘာကိစ္စလိုက်ရှာနေရတာတုန်း” “ဒေါ်လေး ယောကျာ်းလေ ပြသာနာရှာပြီး ရစ်နေလို့” “တောက် ဒီသေနာကတော့…ကောင်းကောင်းကို မနေချင်ဘူး” “အာ့တော့ သမီးမသိဘူး ခုသွားခေါ်ဆိုလို့ လာခေါ်ရတာ” “အေးပါအေ ညည်းကို ငါမေးစရာရှိသေးတယ်” “ရှင် ဘာကိုလဲ ဒေါ်လေး”စိတ်ထဲကတော့ ခပ်လန့်လန့် ဒေါ်လေးများဟိုကိစ္စသိသွားတာလား “နောက်မှအေးဆေးပြောမယ် ညည်းထမင်းစားပြီးပြီလား” “မစားရသေးဘူး မစားတော့ဘူး ဒေါ်လေးရယ် အလုပ်ပင်ပန်းလို့နားချင်နေပြီ””အေးအေး အာ့ဆိုလဲ” အိမ်ရောက်တော့ “တော့်!! ကိုမြတ် ရှင်က ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ မိုးတောင်ကောင်းကောင်းမချုပ်သေးဘူး မူးနေပြန်ပြီ” “ဟာ အချစ်…မိန်းမရယ် ဒီနေ့ တနေကုန် ငါ့မိန်းမလေးလွမ်းနေတာ””အပိုတွေပြောပြန်ပြီ. ချိုလဲ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ထုံးစံအတိုင်း တွတ်ထိုးတာ ထိုင်ကြည့်မနေတော့ပဲရေချိုးဖို့ အဝတ်အစားလဲပြီး ထမီရင်လျားနဲ့ သဘက်ကလေး အုပ်ပြီး ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်သဘက်ကို တန်းမှာတင်ပြီး သွားတိုက် တုန်းရှိသေး”အမေ့ ” နောက်ကနေ ခါးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်တာခံလိုက်ရတယ်”လွမ်းလိုက်တာ ချိုရယ်…” ချို ပလုတ်မြန်မြန်ကျင်းရင်း ကမန်းကတန်း ဖက်ထားတဲ့လက်ကို ဖြေချရတယ်”အကို.. အိမ်ပေါ်မှာ အဒေါ်ရော ဦးလေးရော ရှိတယ်လေ လှမ်းမြင်ရင် ပြသာနာတက်မှာသိရဲ့သားနဲ့” အကို ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး ချိုရဲ့ အချစ်ဦး အသည်းဦး ကိုကိုဦးပါ (ဟိုဘဲကြီး ခင်ဗျအိမ်နာမည်ထည့်ရေးပေးလိုက်တယ် လား)”ဟင့်အင်းတွေ့ချင်လဲတွေ့ပေ့စေ လက်ထပ်ရအောင်ပါဆိုတော့ သူပဲနေ့ရွှေ့ညရွှေ့နဲ့” “ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်သေးတာကို အကိုကလဲ အိမ်မှာ အငယ်တွေရှိသေးတယ် အကိုရဲ့” “မသိဘူးကွာ ချို့ကိုချစ်ချင်တာပဲသိတယ် ချို့ကို လိုးချင်တယ်” ။
ပါးစပ်ကလဲပြောရင်း လက်ကလဲ ရင်လျားထားတဲ့ထမီပေါ်ကနေ ချို့နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုနယ်နေတယ် နဂိုကမှ ပါးကလေးနမ်းရုံတင် အရည်စိုတတ်တဲ့ချိုဟာ ခုလိုမျိုးများဆို ပိုဆိုးပေါ့…”ချို ချိုနို့ကြီးက အယ်နေတာပဲကွာ…ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တယ် စို့ချင်တယ်ကွာ” “အကိုကလဲ ညကျမှ လာခဲ့လေကွာ..နော်.. အခုချို ရေပြီးအောင်ချိုးလိုက်ဦးမယ်လေ နော်” “ဟင့်အင်း နို့စို့ချင်တယ်..ခဏပဲ ခဏပဲ” ပြောပြောဆိုဆို ချို့ကိုမှောင်ရိပ်ထဲဆွဲခေါ်ပြီး ထမီရင်လျားကို ဇွတ်ဆွဲဖြည်ချနေလို့ ချို့မှာ အကုန်ကျွတ်သွားမှာစိုးပြီး ထမီစ လက်နဲ့ကိုင်ပေးထားရတယ်..”ပြွတ်” အကိုက လုံးတစ်မောက်ကြွနေသော နို့အုံ့လေးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် နယ်ပေးရင်း “ချို ကောင်းလား စိတ်ထဲဘယ်လိုနေလဲ” “တမျိူးကြီးပဲ အကိုရယ်” နောက်တော့ အကိုက ချို့နို့သီးလေးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရစို့တော့တာပဲ…တဖက်ကိုစို့ရင် နောက်တဖက်ကိုနယ်တယ်အကို့လက်ဖဝါးကြမ်းကြမ်း ကြီးအောက်မှာ ချို့ နို့လေးနှစ်လုံး အလူးအလဲခံရတယ် တဖြေးဖြေး နို့စို့ခံလို့ကောင်းလာတော့ ချို့တင်ပါးအိအိကြီးတွေမှာ အနည်းငယ်ကြမ်းရှရှ အထိအတွေ့ကိုခံစားရတယ်အကိုက ချို့တင်ပါးအိအိတွေကို အားနဲ့ဆုပ်လိုက် ညှစ်လိုက် ဖြဲလိုက် သူ့စိတ်ကြိုက်ကို အားရပါးရနယ်နေတာနောက်တော့ အကို့နှုတ်ခမ်းတွေက ချို့နို့နှစ်လုံးဆီကနေ နွေးနွေးအိအိ ချို့နှုတ်ခမ်းတွေပေါ်ရောက်လာတယ် ချိုလဲ စိတ်တွေတအားထလာတာနဲ့ အကို့လည်ပင်းကိုဖက်ပြီး အကိုနဲ့အပြိုင် အနမ်းတွေဖလှယ်မိတယ် အကို့လက်တွေလား ချို့ရဲ့ပိပိလေးနေရာမှာပေါ့ အကိုက ချို့ရဲ့ပိပိလေးပေါ်က အမွှေးနုနုလေးတွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးတယ် နောက်တော့ ပိပိတခုလုံးပေါ်ကို လက်ဝါးကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ အပေါ်အောက် ပွတ်သပ် ဆုပ်နယ်တယ် ချို တအားယားလာတယ် အကို့လက်ချောင်းလေးတွေကို တနေရာဆီရောက်စေချင်တယ် “အ အား အကိုရယ် ချို့ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ အ အ အားးးး အားးး”ချို့အသံမှာ ရမက်သံတွေပါနေတယ် တခုခုကို လိုချင်တောင့်တနေတဲ့အသံ “ဘာလုပ်လို့လဲ ချိုရဲ့ အကိုဘယ်မှာ နှိပ်စက်လို့လဲ” “အို…အကိုနော် အ အား”မနှိပ်စက်ဘူးသာဆိုတယ် အကို့ရဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းက ချို့ရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်း လေးကို ထိုးခွဲလာတဲ့အချိန်မှာ ချိုယားလွန်းလို့ အံကိုကြိတ်ထားရတယ်။
နောက်တော့ အကိုရဲ့ လက်ညှိုးလေးက ချို့ရဲ့ ရသာဖု အစိလေးပေါ်ကို ဝလုံးလေးတွေ ဖိဖိရေးတော့တယ်အဖုတ်လေးပေါ်ကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်လိုက် အစိလေးကိုချေလိုက် အကို့စိတ်တိုင်းကျကစားနေတော့ သောက်ရည်တွေ အရမ်းကိုရွှဲလာတော့တာပေါ့ အရည်တွေရွှဲလာတော့အကို့လက်ခလည်လေးကချို့ရဲ့စောက် ခေါင်းပေါက်ကလေးထဲကို တရစ်ချင်းတိုးဝင်လာတော့တယ် “ပြွတ်စ် ပြွတ် ပလပ် …””အားးး အား အကို နာတယ်” “မနာပါဘူးကွာ ချို့မှာ စောက်ရည်တွေဒီလောက်ရွှဲနေတာကို ” “အကိုနော်…အား”အကိုဟာ ချို့စောက်ခေါင်းထဲကို လက်ညိုးနဲ့ သွင်းချည်ထုတ်ချည် လိုးပါတော့တယ် ချို ကောင်းလွန်းလို့ အော်မိတော့မယ် မအော်မိအောင် အံကြိတ်ရင်း အကို့ကို တအားဖက်ထားမိရတယ်… “ချို ကောင်းလား ခံချင်ပြီလား””အား အကိုရယ်” “မေးတာဖြေလေကွာ ခံချင်ပြီလား” လက်ကလဲ ချို့စောက်ခေါင်းထဲကို တစွပ်စွပ်နဲ့ ခပ်သွက်သွက် လိုးပေးနေတယ်…”ချို ခံချင်ပီလား လို့” “အင်း””ဘာအင်းလဲ မရဘူး ဖြေ” “ခံချင်ပြီလို့…””ဘာနဲ့ခံချင်တာလဲ…””….” ချိုမဖြေတော့ အကိုက ချို့ကို တိုင်ကိုမှီခိုင်းပြီး တဖက်က နို့ကို အားရပါးရနယ် နောက်လက်တဖက်က ချို့ ပိပိကို တစွပ်စွပ်နဲ့လိုးနေပါတော့တယ်”အ အား အားး အင်းအင်း” “ဖြေလေ ဖြေ ဘာနဲ့ခံချင်တာလဲ “”ချို့စောက်ပတ်ကြီးနဲ့” “ဘာကို ခံမှာလဲ””အကို့ဟာကြီးနဲ့” “ဘယ်ဟာလဲ ဘယ်ဟာလဲ မြနိမြန်ေ့ဖြ” “အကို အကို့လီးကြီးနဲ့…””ကောင်းပြီချို ချို့ကို အကိုလိုးပေးတော့မယ်” အကိုက လိုးနေတဲ့လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ချို့ပေါင်တဖက်ကို ဆွဲမလိုက်တယ် နောက် အကို့ပုဆိုးကိုလှန်ပြီး ဟပြဲလေးဖြစ်နေတဲ့ အပေါက်ဝကို အကို့လီးကြီး တေ့ထားရင်း ချို့ချိုင်းအောက်က လက်သွင်းပြီး ပုခုံးကို အားရပါးရဖက်ထားတယ် ပြီးတာနဲ့ တေ့ထားတဲ့လီးကို တပြိုင်တည်း ထိုးခွဲလိုက်တယ် “အား အကို နာတယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ” “ချိုရယ် ခဏပဲတော်ကြာကောင်းလာမယ့်ဟာ သိရဲ့သားနဲ့” အကိုက မရပါဘူး ချို့စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို သူ့လီးကြီးနဲ့ ညှောင့်တော့တာပဲ”အို ဖြေးဖြေး ဖြေးဖြေးပါဆိုနေ…”အကို့လီးက တုတ်လဲတုတ်တယ် ၆လက်မကျော်ကျော်လောက်လဲ ရှိတဲ့အတွက် တခါသာ ခံဖူးထားတဲ့ ချို့အတွက်တော့ အတော့်ကို နာပါတယ် “ခဏလေး တော်ကြာကောင်းလာတော့မှာပါ ကိုယ်ဆောင့်တော့မယ်နော်” စောက်ပတ်ဝကျဉ်းပေမဲ့ စောက်ပတ်အုံကြီးတော့ ထိထိမိမိပါပဲ လီးတန်ကို အဆုံးထိဆွဲနှုတ်ပြီး အားရပါးရ လေး ငါးချက်လောက်ဆောင့်ပေးလိုက်တယ် သံချောင်းလို မာတောင့်နေတဲ့လီးဟာ စောက်ပတ်ကျဉ်းကျဉ်းထဲကို အရမ်းဆောင့်ဝင်ရင်း ကာမအရသာတွေပေးနေတယ်။
“အား အီး ဟင်း..ဟင်း..ဟင်း” “ဆောင့် ဆောင့် အကို ချိုခံနိုင်လာပြီ” “ဘွတ် ဗြွတ် ပြွတ်” “အား…ရှီး ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်စမ်းပါ”ချို တအားလိုချင်နေမှန်းသိလို့ အကိုဟာ သူ့လီးကိုခပ်ပြင်းပြင်း အဆက်မပြတ်စောင့်လိုးပေးတယ် ချိုလဲပေါင်ကိုကားပြီး ဖင်ကြီးကို အဆက်မပြတ်ကော့ပေးတယ် “ဟင်း ဟင်း အား အား ကောင်းတယ်” ချို တဟင်းဟင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီး ကာမအရှိန်တွေတက်လာတယ် “ပြွတ် စွပ် ပြွတ်ဘွတ် ဘွတ်” အကိုက သူ့လီးကိုကော့ကော့ပြီး အပြတ်ဆောင့်ပေးတယ် ချိုကလဲ ဖင်ကြီးကော့ပြီး လိုးခံတယ် နှစ်ယောက်သား မီးကုန်ယမ်းကုန် ကြမ်းလာကြတယ် ရမ္မက်တွေဆူဝေရင်း အကြောတဖြက်ဖြက်တလှပ်လှပ် ဖီလင်ခံစားရင်း တဟင်းဟင်း တအားအားညည်းကာ အကိုရဲ့ လရည်တွေ ချို့စောက်ပတ်ထဲ အရှိန်ပြင်းပြင်းဝင်လာရင်း ကာမလမ်းဆုံး ကို ရောက်သွားကြတယ် “ချို ကောင်းလားဟင် အကို လိုးတာကြိုက်လား” “အင်း အရမ်းကောင်းတယ် အကိုရယ်..” “အရမ်းချစ်တယ် ချို…””ချိုလဲ အကိုကိုယ် အရမ်းချစ်တယ်” နောက်တော့ အကိုလဲ လီးကိုရေဆေးပြီး ပြန်သွားတယ် ချိုလဲ အရည်တွေရော လရည်တွေရော ပေကျံနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ဆေးကြောရင်း ရေချိုး အိမ်ပေါ်တက်သွားတော့တယ် ထိုအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတယောက် သောသူက ဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်ဆိုတာကို ချို မသိလိုက်ပါဘူး…”တီ…တီ…တီ..တီ…တီ…တီ” မနက်၆နာရီနှိုးစက်သံကြောင့် ချို့မျက်လုံးတွေ ပွင့်လာခဲ့တယ် နိုးနိုးချင်းသတိရမိတာက ခေါင်းရင်းအိမ်ကို သွားရမလား မသွားရဘူးလား ဆိုတာပဲ…ဟင့်အင်း…မသွားဘူး… ဒီလူက ငါ့ကို အတင်းအကျပ် အနိုင်ကျင့်တာပဲ ဘာမှသွားစရာမလိုဘူး….ငါ့ဘာသာ ပုံမှန်နေပြီး သူနဲ့ရှောင်နေလိုက်ရင် သူဘာမှလုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး…. ချိုတွေးရင်း အလုပ်သွားဖို့ အိပ်ရာထ ထမင်းချိုင့်ပြင်ဆင်ပြီး ရေချိုးဖို့ ထွက်အလာ…”မိချို…””အမလေး…” တဖက်ခြံကနေရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့ အသံကြောင့် ချို လန့်သွားမိတယ်…ဟို လူယုတ်မာသောင်းထိုက်ဆိုတဲ့လူကြီး… “နင့်ကို ငါ မနက်၆ နာရီ လာဖို့ ခေါ်ထားတာလေ…ခု ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ…”ချိုလဲ လန့်သွားပေမဲ့ မာန်တင်းရင်း… “ဒီမယ်…ရှင်ခေါ်တိုင်း ကျွန်မက လာစရာလား…ရှင် ကျွန်မကို အခုလို အကြပ်ကိုင်ပြီး ယုတ်မာဖို့ ကြံရင် ရှင့်ကို ရဲတောင် တိုင်လိုက်လို့ရတယ်သလား…”ချိုလဲ…ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောလိုက်မိတယ်…ဒါကပဲ သူ့ကို ပိုဒေါသထွက်စေမလား မပြောတတ်ဘူး… ။
“ဟား..ဟား..ဟား..ဒီမယ် မိချို…ညည်း ရဲကိုမတိုင်ခင်…ညည်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ကိုဦးဆိုတဲ့ကောင် ညက အိမ်နောက်ဖေးမှာ လိုးနေကြတယ်မလား…ဟင်း ဟင်း…အဲ့ဒါကို…ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ငါ့မှာရှိတယ်…””ရှင်…ရှင်… မဟုတ်တာတွေ မပြောနဲ့…””ဟင်းဟင်း…ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်…နောက် ၁၅ မိနစ်အတွင်း အိမ်ကိုလာခဲ့….မလာရင်တော့…ညည်းရဲ့ ဗီဒီရိုဖိုင်..အင်တာနက်ပေါ်ရောက်သွားစေရမယ်…” “ဟင့်အင်း…ကျွန်မ…””တော်စမ်း…ညည်းလာရင် ဘယ်လိုအချိုးမျိုးနဲ့ လာရမယ်ဆိုတာ သိတယ်နော်…ငါ စောင့်နေမယ်”ပြောပြီး သူလှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်…ချို နေရာမှာပဲ ရပ်ကျန်ခဲ့မိတယ်…သွားပြီ သူ့မှာ ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်တဲ့…သူတင်လိုက်ရင် ငါတော့ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ပြီး ဆယ်လီ ဖြစ်တော့မှာပဲအဲ…ဟုတ်ပေါင် ငါတော့ အရှက်ကွဲတော့မှာပဲ… သူငယ်ချင်းတွေသာ မြင်သွားကြရင် ငါ့ဘွတော့ သွားပြီ….သူ့ဆီ အခုသွားလိုက်ပြီး ဗီဒီယိုဖိုင် ဖျက်လိုက်ဖို့ တောင်းပန်ရမယ်…ကဲပါလေ…တရက်နဲ့တော့ မထူးပါဘူး..ငါလဲ အပျိုမှ မဟုတ်တော့တာ… မထူးတော့တာနဲ့ ချိုလဲ ရေကို ခပ်သွက်သွက်ချိုးရင်း အလုပ်သွားမယ့်ဟန်နဲ့…ခပ်တည်တည်ထွက်ခဲ့တယ် ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်တို့တော့မနိုးသေးဘူး…ခေါင်းရင်းအိမ်ရှေ့ရောက်တော့…လူရိပ်လူခြေကြည့်ပြီး..ဘယ်သူမှမရှိတာနဲ့..အဆင်သင့်ဖွင့်ထားတဲ့ ခြံတံခါးကနေ အိမ်ထဲကို အပြေးဝင်သွားမိတယ်…ဘယ်သူမှ မမြင်မှ ဖြစ်မှာမလား…. ဟိုလူယုတ်မာကြီးက အိမ်ရှေ့ခန်းက စားပွဲပေါ်မှာ ထိုင်နေလေရဲ့…”ဟင်းဟင်း ညည်းရောက်လာပြီကိုး…၆နာရီအရောက်လာဖို့ ခေါ်ထားတာ ခု ၇နာရီကျောနေပြီဆိုတော့ ညည်းအပြစ်ကို သိတယ်မလား””ဟို…ဟို…ချိုတို့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဖျက်ပေးပါနော်…ချိုတောင်းပန်ပါတယ်..” “နောက်မှပြော …ခု အိမ်တံခါးသွားပိတ်လိုက်””ဟုတ်..” ချိုလဲ အပြင်ကလူတွေ မသိလေကောင်းလေမို့…အိမ်တံခါးကို အပြေးလေး ပိတ်လိုက်ပါတယ်..ချို့အဖြစ်က မထူးတော့ဘူး မလား…တံခါးပိတ်ပြီး ပြန်လာတော့ သောင်းထိုက်က “နင်..ငါ့ဆီကို ဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲ” “ဟို..ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ဖျက်ပေးဖို့လာပြောတာပါ” “ဘာ…နင့်ကိုငါ မနေ့တည်းက ဘာပြောထားလဲ ပြန်ပြောစမ်း..” ချိုလဲ အဲ့တော့မှမနေ့က ကားပေါ်က အဖြစ်အပျက်ကိုတွေးမိပြီး သူမှာခဲ့တာ ပြန်သတိရပါတယ်…”ဟို ဦး လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံဖို့လာတာပါ”ချိုလဲ မြန်မြန်ပြီး ပြီးရော အပြတ်ပဲပြောလိုက်တယ်.. “ဘာဖြစ်လို့ အလိုးခံချင်တာလဲ..ကောင်းကောင်းဖြေနော်” ပြောချင်တာတော့ ရှင် အတင်းအကျပ် အနိုင်ကျင့်လို့ လာရတာလို့ ဒါပေမဲ့”ဟို ချို…ချို့ဟာလေး ယားပြီး မနေနိုင်လို့ပါ””ဘယ်ဟာလဲ..ပြောစမ်း..” “ချို..ချို့အဖုတ်လေးပါ” “ဟား..ဟား အဖုတ်လေး မဟုတ်ပါဘူး အဖုတ်ကြီးပါ…” “ဟွင်း..ဟွင်း..ညည်းက ဒီလောက်အလိုးခံချင်နေမှတော့ ငါက လိုးပေးရမှာပေါ့…။
မလိုးခင်ငါ့လီးတောင်လာအောင်..အရင်စုပ် ပေးပါဦး…လာလာ”ပြောပြောဆိုဆို သောင်းထိုက်က သူ့ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်ပါတယ်… ချိုလဲ အမှတ်တမဲ့မို့ မျက်နှာလွှဲဖို့ မေ့သွားမိပါတယ် သူ့လီးက အကို့လိုပဲ ရှည်တယ်ဆိုပေမဲ့လုံးပတ်ကတော့အတော့်ကိုတုတ်ပါ တယ်ဒီအတိုင်းတောင်ချို့လက်မနဲ့လက်ခလည်ဝိုင်းစာလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ တောင်လာရင် အတော့်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ… နောက်ပြီး ထိပ်ကဒစ်ခေါင်းကလဲ အတော့်ကိုကြီးပါတယ် တခုကံကောင်းတာက သူ့လီးမှာ ဘာဂေါ်လီမှ ရှိမနေပါဘူး..ဒါမဲ့ ခုမှ နှစ်ခါလောက် အလိုးခံဖူးတဲ့ချိုဟာ ဒီ လီးအတုတ်ကြီးနဲ့ ဘယ်လိုများ ခံရပါ့မလဲ…ချို..လီးကြီးကို စိုက်ကြည့်ရင်း အတွေးလွန်နေမိတော့…ဦးသောင်းထိုက်ကစိတ်မရှည်တော့ပါဘူး..”ဟဲ့…ဘာလုပ်နေတာလဲ လီးမမြင်ဖူးတာ ကျနေတာပဲ…လီးစုပ်ပေးပါဆိုနေ လာခဲ့စမ်း” “ဟုတ် လာပါပြီ” ချိုလဲ ဦးသောင်းထိုက် ထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံနားကိုသွားရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်..နောက်ပြီး ပျော့ခွေနေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို လက်နဲ့မဝံ့မရဲ ဖွဖွလေးကိုင်လိုက်ပါတော့တယ် အတော့်ကို အသည်းယားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါက ပထမဆုံး အကြိမ် ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တံကို ကိုင်ဖူးတာပါပဲ..အကိုနဲ့တုန်းက အကိုကလဲ မကိုင်ခိုင်းသလို ချိုကိုယ်တိုင်လဲ ကိုင်ကြည့်ချင်ပေမဲ့ ရှက်နေတာကြောင့်ပါ… ခုတော့ ကိုယ့်ကို အတင်းအဓမ္မအနိုင်ကျင့်ပြီး ကိုင်ခိုင်းတာမို့လား ကိုယ့်ဘာသာ ကိုင်ချင်တာကြောင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး ချို အတော့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်…လိင်တံဟာ နွေးနွေးအိအိနဲ့ မာသလိုလို အရိုးတစ်ချောင်းရှိနေသလိုလိုပေမဲ့ ခွေခွေခေါက်ခေါက်နဲ့ မြွေတစ်ကောင်လိုပါပဲ… “မိချို…နင်လီးစုပ်ဖူးလား””ဟင့်အင်း…မစုပ်ဖူးပါဘူး” “နင့်အကောင်ကရော မစုပ်ခိုင်းဘူးလား” “ဟင့်အင်း…ဒါက ပထမဆုံးအကြိမ် လီးကို ကိုင်ဖူးတာပါ” “ဟား..ဟား ဒါဆို ငါ့လီးက နင့်နှုတ်ခမ်းလှလှလေးအတွက် ပထမဆုံးပေါ့…ကောင်းဘီ..နင့်ကို လီးစုပ်သင်ပေးရမယ်” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့””ဒီမှာ လီးကို ဒီလိုဖွဖွလေး အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲပေးရတယ်..အာ့ကို ဂွင်းတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်. .နင်တို့စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးနဲ့ လိုးသလိုပဲ စစချင်းတော့ ဖွဖွလေး လှုပ်ရှားရတယ်..နောက် တဖြည်းဖြည်း မာလာတော့မှ ပါးစပ် နဲ့ငုံပြီး စုပ်ပေးရတာ..ကဲ ငါပြောသလို လုပ်ကြည့်” ချိုလဲ လီးကို တခါမှမစုပ်ဖူးပေမဲ့ အပြာကားတွေ ကြည့်ဖူးနေ တာကြောင့်…ဘယ်လိုစုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ အနည်းငယ်သိပါတယ်…ဒါကြောင့် သူပြောသလို ဖွဖွယွယွလေး ကိုင်ပြီး…အထက်အောက် ဖြေးဖြေး ဂွင်းထုပေးနေ လိုက်တယ်…။
သူ့လီးကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်း တောင်လာပါတယ် အစကလို ပျော့ခွေမနေတော့ပါဘူး… အဲ့တော့မှ ချိုလဲ သူ့လီးကို သူ့ဗိုက်ပေါ်တင်ပြီး အောက်ကနေ..ဒစ်အထိ လျှာဖျားနဲ့ ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲလိုက်တယ် တချက်..နှစ်ချက်…သူ့လီးကို ရေဆေးထားတယ်ထင်ပါတယ်.. .အနံ့ နဲ့ အရသာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမတွေ့ရဘူး…တော်ပါသေးရဲ့ (အမှန်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ ရေမဆေးထားရင် ရွံတတ်လို့) နောက်ပြီးတော့လိင်တံကိုတချက် နှစ်ချက်လျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲတယ် သုံးချက်မြောက်မှာပွတ်ဆွဲရင်း ထိပ်ဒစ်ခေါင်းကိုငုံပလိုက်တယ်… “အား…ရှီး….ကျွတ်ကျွတ်” ဦးသောင်းထိုက်ဆီက ဖီးလ်တက်လာတဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ် နောက်ပြီး ချို့ခေါင်းကို သူ့လက်ကြီးနဲ့ ဆွဲဖိလိုက်တယ် “အ…အွတ် အွတ်…”တချက်တည်းနဲ့ ထိပ်ဒစ်ခေါင်းကြီးက ချို့ အာခေါင်ကိုလာထောက်တယ်… “အူး…ဝူး..ဝူး …ဂလု..ဂလု…္ဂ္ပ္ဂ္ပ္ဂပ်” ချိုခေါင်းကို တမိနစ်လောက်ဖိထားပြီးတော့ လက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်”အား…ကောင်းလိုက်တာ ” သူကကောင်းနေ ချို့မှာတော့အသက်တောင်ရှုမရဘူး “အဟွတ်..ဟွတ်..ဟင်းဟင်း” “ကဲ..ပြန်စုပ်စမ်း..ရပ်မနေနဲ့ ငါ့လီးတောင်လာမှ နင့်ကို အပီလိုးပေးလို့ရမှာ”ချို မျက်ရည်တွေလဲဝဲပြီး ခုချိန်ထိ အသက်ရှုမဝသေးပါဘူး.. “ကဲ..ငါ့လီးကို နင့်နှုတ်ခမ်းလှလှလေးနဲ့ အပီစုပ်ပေး…ပြီးရင် နင့်ကို အပီလိုးပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား ဟင်းဟင်း” ချိုလဲ…ဆက်စုပ်ချင်သေးတာမို့ သူ့လီးကို အရင်းကကိုင်ပြီး ထိပ်ဒစ်လုံးကြီးကို ပြန်စုပ်ပါတယ်…လီးကြီးက တဖြည်းဖြည်း တောင်လာတာမို့ ချို့ပါးစပ်ထဲမှာ ပြည့်သိပ်နေပါတယ် နောက်တော့ ချိုက လီးထိပ်ကိုငုံကာ လျှာဖျားလေးနဲ့ ဒစ်ပတ်လည်လျှက်လိုက်..ပါးစပ်ထဲကို ဝင်သလောက်သွင်း လိုက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အာခေါင်ထဲထိရောက်အောင် အခက်အခဲမရှိစုပ်နိုင်နေပါတယ်…ပြီးတော့ လီးကိုပြန်ထုတ်လိုက် လိင်တန်အောက်ဖက်က အကျောလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့တို့လိုက် အရင်းထိ လျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲလိုက်နဲ့ ဗီဒီယိုကားတွေထဲကလို အတုခိုးပြီး စုပ်ပေးနေပါတော့တယ်… ဦးသောင်းထိုက်လဲ တအားအား တရှီးရှီးဖြစ်နေတော့တာပေါ့… “ရှီး…ကောင်းလိုက်တာဟာ…ငါနင့်ကို လိုးချင်လာပြီ.. .လီးစုပ်တာတော်လိုက်တော့….” ။
ချိုကလဲ စုပ်နေရတာ အရသာတွေ့လာပြီမို့ လုံးဝကို မလွှတ်ပဲ…ဆက်စုပ်နေပါတော့တယ်… “ဟာ..ဒီကောင်မ လိုးပါမယ်ဆို…တချီလိုးပြီးရင် တနေကုန်စုပ်ရမယ် ပါးစပ်ထဲက ချွတ်ရမယ်မမှတ်နဲ့.. .ရော့ကွာ…အဲ့မယ် အင့်..အင့်..စုပ်…စုပ်စမ်း” ပြောပြောဆိုဆို ချို့ဆံပင်ကိုကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲကို အဖုတ်ကို လိုးသလို ပင့်ပင့်ပြီးလိုးပါတော့တယ်… “အု…အွတ်…ဂွပ်…ဂွပ်…”ချို အနေနဲ့အတော်ကို ခံရခက်ပါတယ် မျက်ရည်တွေလဲထွက်သလို..အာခေါင်ထဲထိခံစားရခက်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်…ချိုဟာ အတော်ကိုနာကျင်ပြီး…ရုန်းဖယ်ဖို့ လုပ်မိတယ်…”ဘာအခုမှ ရုန်းတာလဲ…နင်ပဲစုပ်ချင်တယ်ဆို.. .စုပ်လေ…ရော့ရော့.နင့်ပါးစပ်ကိုအပီလိုးပစ်မယ်ဟာ.ရော့..ရော့” ချို အတင်းရုန်းပြီး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တာတွေ့တော့မှ… “လာခဲ့…နင့်စောက်ဖုတ်ကို အသေလိုးပစ်မယ်…” “အား…အဟင့်အဟင့်…”ဦးသောင်းထိုက်က ချို့ဆံပင်ကနေဆွဲကိုင်ပြီး…သူ့အိပ်ခန်းထဲထိတရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတယ်…အခန်းထဲရောက်တော့… “နင့်အဝတ်တွေချွတ်လိုက်…တခုချင်းချွတ်…” “ဟို..ဒီအတိုင်းပဲလုပ်လို့မရဘူးလား…ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်” “လျှာရှည်ပြန်ပြီလား…ဒီလောက်လျှာရှည်တဲ့ပါးစပ်…ထမင်းမစားနိုင်အောင်..လိုးပစ်ရမယ်” ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ် ဦးရယ်… “ဟာ…ဒီကောင်မ ကြာတယ် မြန်မြန်ချွတ်လို့ပြောနေတာ..စိတ်မရှည်တော့ဘူး… နင့်ဘာသာ မချွတ်ရင် ငါချွတ်ပေးရတာပေါ့..လာစမ်း…ကဲဟာ..” သောင်းထိုက်ဟာ ချို့ရဲ့ရင်စေ့အကျီ ခါးတိုလေးကို ဆွဲဖြဲပစ်ပါတယ်…ထမီကတော့ ခုနက အခန်းထဲဆွဲခေါ်လာတည်းက ကျွတ်သွားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပန်းရောင်လေးသာ ကျန်ပါတော့တယ်.. ။
ခု ဦးသောင်းထိုက်က ချိုရဲ့အကျီကို ဆွဲဖြဲ ချွတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် ချို့မှာ အတွင်းခံ ဘရာနဲ့ ပင်တီသာ ကိုယ်လုံးမှာကျန်ပါတော့တယ်.. “အခု…နင့်မှာ ဒါပဲကျန်တော့တယ်…နင့်ဘာသာ ချွတ်မလား..ငါဆက်ချွတ်ပေးရမှာလား..” “အီး…ဟင့်..ကျွန်မ ဘာသာချွတ်ပါ့မယ် ဟင့် ဟင့်” “အေး..အာ့ဆိုလဲ သဘော..ဖြေးဖြေးချင်းချွတ် ဟိုဘက်လှည့်ပြီးချွတ်..ဒါမှ နင့်ဖင်တုံးကြီးတွေကို ကြည့်ရမှာ” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါ” ချိုလဲ သူ့ကိုကျောပေးပြီး…ပင်တီကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲချွတ်ပါတယ်..ချို့တင်တွေဟာ ကြူကြူသင်းလောက်မကိတ်ပေမဲ့ အိချောပိုလောက်တော့ ကိတ်တဲ့အတွက်..ပင်တီဟာ ရှောရှောရူရှုမကျွတ်လာပါဘူး… အာ့ကြောင့် ချိုဟာ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဟိုယမ်းဒီယမ်းနဲ့ ချွတ်လိုက်ရပါတယ် ဖင်အပြောင်သားနဲ့ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက် ဝင်းဝင်းအိအိ ထွက်လာတာကို မြင်ပြီး ဦးသောင်းထိုက် မနေနိုင်တော့ပဲ “တောက်! ဖင်တုန်းကြီးတွေက အယ်နေတာပဲကွာ..နောက်ကနေ စောင့်လိုးလိုက်ရရင်တော့ ဟင်းဟင်း” ပြောရင်း ဖင်ကြီးကို အသာဆွဲဆိတ်လိုက်ရာချို့ဖင်တုန်းကြီးခမျာ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားသည်။ “ဒီဖက်ကို လှည့်လိုက်စမ်း” ချိုလည်း သူ့ဘက်သို့မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လိုက်ရသည်။ကာမတန်ခိုးများဖြင့် ရမက်ဆန်သောမျက်လုံးများ၏အကြည့်ကို မခံနိုင်သဖြင့် ချို့မှာ ခေါင်းငုံ့ခြေစုံရပ်ရင်း လက်တဖက်က နို့ကိုကွယ် ကျန်တဖက်က အဖုတ်လေးအား မလုံ့တလုံ ကွယ်ထားမိသည်။ “အောင်မာ…တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီး အလိုးခံရတော့မှာကိုများ ရှက်နေသေးတယ် လက်နှစ်ဖက်လုံးဖယ်လိုက်” “မလုပ်ပါနဲ့ ဦးရယ်…ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်” “ဖယ်ဆို ဖယ်လိုက်..လက်ကိုနောက်ပစ်ထား” ပြောလဲရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ချိုလဲ လက်ကိုအနောက်ပစ်ပြီး ခြေစုံရပ်နေမိတယ် ဦးသောင်းထိုက် ချက်ချင်းရောက်လာပြီး ချို့ကိုသိုင်းဖက် နှုတ်ခမ်းတွေကို အတင်းစုပ်နမ်းပါတော့တယ်။ သူ့လက်ကြမ်းကြီးတွေဟာ ချို့တင်ပါးတွေကိုအားရပါးရ နယ်နေတယ်… ချို…စိတ်တွေ ထ’သထက် ထ’လာတယ်… ချို့ပေါင်ကြားက ပိပိလေးဟာလဲ တခုခုကို လိုချင်သလို အရည်တွေက ရွှဲနစ်နေတယ် ဦးသောင်းထိုက်ဟာ ချို့ကိုနမ်းနေရာကနေ လွှတ်ပြီး ချို့ပုခုံးကိုခပ်သာသာလေး ဆောင့်တွန်းလိုက်တယ် ချို့တကိုယ်လုံး ကာမစိတ်တွေ တက်ပြီး တုန်ရီနေပါပြီ.. “ကဲ…မိချို…ညည်းတော့ နာပြီသာမှတ်ပေတော့..ငါ့ကို ကလန်ကဆန် လုပ်ချင်တဲ့ကောင်မ..သွား…ကုတင်ပေါ်မှာ နင့်ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားနေအောင်ဖြဲထားချည်” ချိုလဲ စိတ်ထဲကနေ လိုလိုလားလား ခံချင်နေတာမို့..ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပေးထားလိုက်ပါတယ်… ဦးသောင်းထိုက်ဟာ သူ့လီးကို လက်တဖက်ကကိုင် တချက်နှစ်ချက်ဂွင်းတိုက်ရင်း ချို့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ထပ်ဆွဲဖြဲလိုက်တယ်..။
ထို့နောက် သူ၏လီးကြီးအား ချို့ပိပိအဝတွင်တေ့လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးခြင်း အသာသွင်းလေတယ်။ ချို့မှာ နှစ်ကြိမ်ခန့်သာ အလိုးခံပြီးသည်ဖြစ်၍ ချို၏ပိပိလေးမှာ ကျပ်ကျပ်ကလေးဖြစ်၍ နေလေသည်။ “အားးးဦး..ဖြေးဖြေး” “အားးးရှီးးးးးကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ပတ်” “အားး..အဟင့်”နောက်ဆုံး လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး ချို့ပိပိထဲဝင်သွားတော့တယ်..လီးဝင်သွားသည်နှင့် ချို့ပိပိထဲမှ အရည်များ..ပိုထွက်လာပြီး ရှောရှောရှုရှု ဖြစ်၍လာသည်… လိုးကောင်းလာသည်နှင့် ဦးသောင်းထိုက်က ချို့ဒူးခေါက်ကွေးနှစ်ဖက်ကို သူ့လက်နှင့် သိုင်းဖက်ပြီး…အားနှင့်ဆောင့်ချပါတော့တယ်… “အားးး…အဟင့်” “ကဲကွာ…ဒီလောက်တောင် အရည်ရွှဲနေတဲ့ စောက်ပတ်…ကဲကွာ…အင့်..အင့်…” “အား…နာတယ်…ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ””နင်…ငါ့ကို ကလန်ကဆန်လုပ်ချင်နေတာလေ…နင့်ကိုလိုးသတ်မယ်… ကောင်မ…ရော့…ရော့…ငါ့လီး…””အား…အမေ့…နာတယ်” ဦးသောင်းထိုက်က ချို့အပေါ်ကနေ အားနှင့်ဆောင့်လိုးနေပြီး…တချက်တချက် မွှေလိုးလိုက်…ဆောင့်လိုးလိုက်…ပင့်လိုးလိုက်ဖြင့် အားရပါးရကြီးကို လိုးနေတော့… “အားးး အဟင့်…အရမ်းကောင်းတယ်…” “ကောင်မ..ငါ့လီးကို ကြိုက်နေပြီမလား…နောက်ခါ ငါခေါ်ရင် လာမလား…အင့်” “ဟုတ်…ဟုတ်..လာပါ့မယ်” “ပြောစမ်း…ဘာလာလုပ်မှာလဲ..” “ဟို…ဦးကြိုက်တာ လုပ်ပါ…အားးး” “ငါနင့်စောက်ပတ်ကို တနေကုန်လိုးရင်ရော” “ဟုတ် ရပါတယ်” “ဘာရတာလဲ…ပြန်ပြောစမ်း…ရော့…ငါ့လီး..” “ဟို…ဟုတ်…သမီးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်” “ဘာလုပ်ရမှာလဲ”ပြောရင်း ဦးသောင်းထိုက်က သူ၏လီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်…ချိုသည် ကာမလမ်းဆုံးရောက်ခါနီးပြီမို့…လီးဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ…ဆန့်တငံ့ငံ့နှင့် ရူးမတတ်ဖြစ်သွားရလေတယ်… “အို…ဘာလို့ဆွဲထုတ်လိုက်တာလဲ” “ပြော…နင့်ကိုငါ ဘာလုပ်ရမလဲ” “ဦးရယ်..ချိုတောင်းပန်ပါတယ်” “အာ့ဆို ပြောလေ…နင့်ကို ငါဘာလုပ်ရမလဲ” “လိုးပါ…. လိုးပေးပါ…” ချိုသည် အိပ်ရာပေါ်၌ လူးလိမ့်၍ ဦးသောင်းထိုက်အား လိုးပေးရန် တောင်းပန်နေရတယ်…”ပြန်ပြောစမ်း…” “ဦး လီးကြီးနဲ့ ချို့ကို လိုးပေးပါ…ချို အရမ်းလိုးခံချင်နေပါပြီ…” “အေး…နင်တောင်းပန်လို့ ငါလိုးပေးရတာနော်” ထို့နောက် ဦးသောင်းထိုက်က ချို့ပိပိထဲ သူ့လီးကြီးအား…တချက်ထဲဆောင့်သွင်းလိုက်ပြီး…တရစပ် လိုးပါတော့သည်…။
“အား…လိုးပါ…ဆောင့်…ဆောင့်…အား…” “ရော့ကွာ…အင့်..အင့်” “အမလေး..ကောင်းလိုက်တာ…အား..” “ကောင်မ…လီးလိုချင်တယ်မလား…ရော့..ယူ…ငါ့လရည်တွေယူ…အားးးး..ရှီး…ရော့ကွာ…အင့်…အင့်” အခန်းထဲ၌ လီးနဲ့ စောက်ပတ် ဝင်သံထွက်သံနှင့် ချို့အော်သံ ဦးသောင်းထိုက်၏ မာန်နှင့်လိုးသံတို့ဆူညံနေတယ်… “ငါပြီးတော့မယ်…နင့်စောက်ပတ်ထဲ ငါ့လရည်တွေထည့်မယ်…အားး..” ဦးသောင်းထိုက်က ချို့စောက်ပတ်အား မနားတမ်း တရစပ်လိုးပြီး…သူ၏လီးကြီးအား…နောက်ဆုံး အားနှင့် ဖိသွင်းလိုက်ပြီး…သူ၏လရည်များအား ပန်းထည့်လိုက်တယ်… “အားးးအ…ကောင်းလိုက်တာ” ချိုသည်လဲ ပူနွေးသော လရည်များစောက်ပတ်ထဲ အရှိန်နှင့်ပန်းဝင်လာသဖြင့် တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး…ပြီးဆုံးခြင်းသိုရောက်သွားတော့တယ်..””အားးအဟင့်…ဟင့်” “ကောင်းလိုက်တာ မိချိုရယ်” ဦးသောင်းထိုက်သည်…ချို့ကိုယ်လုံးပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး…ချို့ကို ဖက်ထားလိုက်လေတော့သည်……ပြီးပါပြီ။